Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay in la iibiyo xaruntii ay ku... | Universal Somali TV
Ka dib kulan ay Magaalada Garoowe ku yeesheen Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayay cod u qaadeen in la iibiyo iyo in kale Xarunta Baarlamaanka Puntland ee Magaalada Garoowe.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa Xildhibaanada u qaybiyay nuqul talo soo jeedin ah, kuna aadan in la iibiyo Xarunta Baarlamaanka Puntland, ee uu haataan ku shaqeeyo.
Baahida keentay in xilligan la iibiyo Xaruntii Baarlamaanka Puntland uu ku shaqeynayay ayaa lagu sheegay, iyadoo ku taalo goobo ay rayidku ku badan yihiin. Sidaasi daraadeedna aysan ku haboonayn in haataan uu ku shaqeeyo Golaha Baarlamaanka Puntland.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa dood ka dib u codeeyay in la iibiyo xaruntan, lana raadiyo xarun kale oo uu ku shaqeeyo Baarlamaanka, taasoo meel ammaan ahi ku taalo amaba ka ag-dhow xarumaha kale ee maamulka.
31 Xildhibaan ayaa haa ugu codeeyay in la xaraasho Xarunta Baarlamaanka, iyadoo 7 Xildhibaan ay diiday, halka 3 kalana ay ka aamustay.
Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo kulankan shir guddoominayay ayaan sheegin halka ay u wareegi doonaan amaba ay ka dhiganayaan xaruntooda cusub, marka laga soo taggo in la raadiyo goob ammaan ah oo Baarlamaanka Puntland uu ku shaqayn karo.
Kan-xiga4 carruur ah oo ku dhimatay dhisme ku...
Kan-horeWariye Gurbiye oo maanta la horkeenay...
60,851,017 unique visits